पोर्न उद्योग छाडेपछि के गर्दैछन् यी पोर्न स्टारहरु? « Dainik Online
पोर्न उद्योग छाडेपछि के गर्दैछन् यी पोर्न स्टारहरु?
प्रकाशित मिति : २६ जेष्ठ २०७९, बिहिबार ३ : २७
लसएञ्जल्स । पोर्न फिल्म उद्योगमा करियर सकिएपछि पोर्न स्टार के गरिरहेका छन् ? यो आम चासोको विषय छ । यो प्रश्नको जवाफ सन् २०१२ मा रिलिज फिल्म निर्माता ब्राइसी वागोनरको फिल्म ‘आफ्टर पोर्न इन्डस्’मा छ । यसको दुई सिक्वेल छन् ।